နိုင်ငံခြားသွားတဲ့ ယောင်္ကျားကို မျှော်ရင်း ဘဝနစ်မွန်းသွားခဲ့ရတဲ့ စိတ်ဝေဒနာရှင်မလေး – Myanmar
နိုင်ငံခြားသွားတဲ့ ယောင်္ကျားကို မျှော်ရင်း ဘဝနစ်မွန်းသွားခဲ့ရတဲ့ စိတ်ဝေဒနာရှင်မလေး
November 5, 2020 admin Story 0
(ရင်ထဲမကောင်းလွန်းလို့ကူးပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ) သူမအပေါ် သံယောဇဉ်လက်ကျန်ရှိသေးသူတွေ ဒီစာလေးကို မြင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ရင်း သက်ဆိုင်သူတွေ သိစေချင်လို့ သူမနံမည်လေးပါ ထည့်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်.
သူမ အမည်က မစိုးအိမွန်…ဇာတိကတော့ ပုံ့ တို့ ဟင်္သာတနဲ့ မလှမ်း မကမ်းက ရွာလေးတရွာ ကပေါ့…သူမက အသက်က အခုဆို ရှိလှ ၃၉/ ၄၀ ပါ…
သူမဘဝလေးက အစကတော့ ယဉ်သကို ဆိုသလိုဘဲ…အစပိုင်းတော့ အတော်လေးကို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီး ပြည့်စုံ့ခဲ့ပါတယ်…သူမတို့ မိသားစုလေးမှာ သူမဟာ မိဘနှစ်ပါးအလယ်မှာ ရှုမငြီးတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးပါ…သူမတို့ အိမ်က တိုက်အိမ်လေးနဲ့ စီးပွားရေကလဲ ဘက်ထရီအိုးတွေ ရောင်းတယ်ဆိုတော့ အတန်အသင့် ပြည့်စုံတယ် ဆိုရမပေါ့…
ရုပ်ရည်ကလဲ ဖြူဖြူ နုနု ချောချော လူကောင်သေးသေးလေးနဲ့ မျက်လုံး မျက်ခုံး နှာတံ အတော်ကို လှသူပါ…သူမ အရွယ်ရောက်တော့ တက္ကသိုလ်တက်တယ်…ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်ကနေ ဓာတုလား…သင်္ချာလား ပုံ့ သိပ်မမှတ်တော့…မေဂျာတစ်ခုနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့တယ်….ကျောင်းပြီးတော့ သမရိုးကျပါဘဲ…သူမ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်…သူတို့ အိမ်ထောင်ကျပြီး မကြာခင်မှာဘဲ ယောက်ကျားလေး မိဘများက ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး အကုန်အကျခံပြီး သူတို့သားလေးကို ဂျပန်ကို ပို့လိုက်ကြတယ်…အဲ့ဒီ ချိန်တုံးကလဲ ဂျပန်သွားနိုင်ဖို့ဆိုတာ အတော်ကို အကုန်ခံနိုင်မှ ရတာပါ…
တစ်ဦးတည်းသော သမီးတွေရဲ့ စိတ်ပဲပြောရမလား…ပုံ့တို့လို တစ်ဦးတည်းသော သားသမီးတွေဆိုတာ ငွေထက် ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်တာ၊ ကြင်နာတာ၊ ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပေးတာကို ပိုပြီး နှစ်သက်ကြပါတယ်…သူမလဲ ဒီလိုဘဲ ထင်ပါရဲ့…အမျိုးသား နိုင်ငံခြားသွားတာကို မကျေနပ်တဲ့သူမ…အမျိုးသား ပိုသြမျှကို ဖြုန်းပါတော့တယ်…
ရန်ကုန်သွားတယ်…ကလပ်တွေ ဘာတွေတက်တယ်ပေါ့လေ…ဒီသတင်းကို ပြန်ကြားတဲ့လအမျိုးသားက ငွေလဲ မပို့တော့သလို နောက်ပိုင်းအဆက်အသွယ်လဲ မလုပ်တော့ပါဘူး…ဒီလိုနဲ့ သူမ စိတ်တွေ စတင်ပျံလွင့်စပြုပြီး လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ပါတော့တယ်…
တချိန်ထဲမှာဘဲ ဘဝရဲ့ အတွယ်တာရဆုံးဖြစ်တဲ့ ဖခင်က နောက်အိမ်ထောင် ပြုပါတယ်…ဖခင်ကို တွယ်တာလွန်းတဲ့ သူမရဲ့မိခင်ရော၊ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဘဝတွေ ဗြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီး ချစ်ရသူတွေရဲ့ ထားသွားခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ သူမကိုယ်တိုင်ရော စိတ်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ပြီး သားအမိနှစ်ယောက် အထုတ်တစ်ထုတ်နဲ့ လမ်းပေါ်ရောက်တဲ့ထိ ဖြစ်သွားရှာပါတယ်…
ဒီလိုနဲ့ စိတ်ဝေဒနာသည် သားအမိနှစ်ယောက် အထုတ်တစ်ထုတ်နဲ့ ရွာရိုးလျှောက်၊ တောင်းရမ်းစားသောက်ရင်း ပြင်ဦးလွင် ပြင်စာရွာက သဘာဝရိပ်သာကို ရောက်သွားရှာတယ်…မိခင်ကြီးကတော့ တရားအရိပ်မှာ နေနိုင်ပေမဲ့… အသက်အရွယ်လဲ ငယ်၊ ပညာလေးလဲတတ်၊ ကောင်းကောင်းစား၊ ကောင်းကောင်းနေနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ သူမကတော့ သူမစိတ်မကျန်းမာတော့တာ မသိရှာဘဲ…အလုပ်ရှာမယ်ဆိုပြီး ခဏခဏ ထွက်သွားတတ်တယ်….
ဒီလိုနဲ့ ရိပ်သာကလဲ သူမကို လက်မခံတော့ဘဲ နောက်ဆုံး တောင်ကြီးမြို့ပေါ် ဟိုဒီလျှောက်ရင်း ပုံ့နဲ့ဆက်သွယ်မိပြီး သွားခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့…လမ်းမှာတော့ တတွတ်တွတ်ပြောရှာတယ်…သူမ အမျိုးသားနိုင်ငံခြားမှာ ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ သူမပါလိုက်သွားမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ အခွင့်အလမ်း ဂျာနယ် အမြဲဖတ်ပြီး အလုပ်ရှာနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း…သူ နှုတ်ခမ်းနီတွေ၊ ရေမွှေးတွေ ဝယ်မယ် အလှတွေပြင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း စုံလို့ပေါ့…မျက်နှာကြီးတဲ့ သူရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းလဲ ပါသေးတယ်လေ…
သူမကို ဟင်္သာတထိရောက်အောင်တော့ ခက်ခက်ခဲခဲ ခေါ်ခဲ့ရတာပါ…ဘာလို့ဆိုတော့ အထည်ကြီး ပျက်ဖြစ်လေတဲ့ သူမက ပူတဲ့ နေရာမနေနိုင်ပါဘူးတဲ့၊ တောင်ကြီးလို အေးတဲ့နေရာနဲ့ဘဲ တည့်ပါသတဲ့လေ…လမ်းမှာရပ်တာနဲ့ ထွက်ပြေးမယ်လုပ်လို့ မနည်းကို ချော့မော့ စောင့်ကြပ်ခေါ်ခဲ့ရတယ်…
ဒီလိုနဲ့ ရိပ်သာရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့…ဒီကျတော့ သူက ဝိတ်ချနေတာမို့ဆိုပြီး ထမင်းလုံးဝ ကျွေးမရဘူးရယ်…အချိုရည်ဘဲ သောက်တယ်…မုန့်တွေဘဲစားတယ်…သူမ ဒီလိုတွေ စိတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရပေမဲ့လဲ သူမရဲ့ မအေကိုတော့ လုံးဝမမေ့ရှာပါဘူး…ထားခဲ့ရတဲ့ သူမအမေကို ပြန်ခေါ်ပေးဖို့ပြောရှာတယ်…ဘာကျွေးကျွေး ဘာစားစား၊ တစ်ခုထဲဆို မယူဘူး မစားဘူး…အမြဲ သူမအမေအတွက်ပါ တစ်ခုပိုတောင်းပြီး မေမေနဲ့ တွေ့ရင် ကျွေးဖို့ဆို ပုံးထဲ ထည့်သိမ်းရှာတဲ့….
ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက် နှစ်ရက်နေ ရိပ်သာနဲ့ အသားကျလာတော့ ဆေးစစ်ပြီး ပုံ့ စိတ်ကျန်းမာရေး ဆရာဝန်ပြတယ်….အိပ်တာကလွဲရင် သိပ်မသက်သာရှာပါဘူး…တနေ့တော့ ရိပ်သာက သိပ်ကျပ်မပြည့်ရှာတဲ့ ဖိုးလပြည့်လေး မေမေနဲ့ အအေးလုရင်း ရန်ဖြစ်ပြီး အချွန်နဲ့ ထိုးမယ်လုပ်တယ်…အဲ့လိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ကြမ်းလာတော့ စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံ ပုံ့တို့ ပို့ခဲ့ရတယ်…အဲ့ချိန်ထိ သူမမှာ စိတ်မကျန်းမာတာကလွဲရင် ဘာရောဂါမှ မရှိသေးပါဘူး….
စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံပို့တော့လဲ ပုံ့အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်…ဒီတိုင်းဆို ထမင်းအလကားကျွေးပါတယ်…တနေ့ ၅၀၀ ပေးရင် အသားဟင်းနဲ့ ကျွေးပါတယ်…ပုံ့ သူကောင်းကောင်းစားရပါစေတော့ဆိုပြီး ၃ လစာ ရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်…နောက်တော့ကောင်းပြီဆို ဖုန်းဆက်တော့ သွားခေါ်ကြပါတယ်…အခြေအနေကြည့်တော့ သိပ်မထူးတာမို့…ထပ်ထားပါရစေဆိုပြီး ဟင်းဖိုးထပ်မံပေးခဲ့ပြီး ထားခဲ့ပါတယ်….
ဒီတခါတော့ ၃ လလဲ မဆက်သွယ်၊ ၆ လလဲ မဆက်သွယ်နဲ့၊ တော်တော်လေးကြာတော့ ဒုတိယပုံမှာ မြင်ရတဲ့ ပုံစံအတိုင်း စိတ်ဝေဒနာသည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် မိုးကုတ်ရောက်နေတယ်ဆိုပြီး လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ပါတယ်…ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ပုံဖြစ်နေတော့ ပုံ့တို့သွားထပ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်…
ဘယ်အချိန် ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ပြုလိုက်တယ် ပုံ့တို့ မသိပါဘူး…သူ့ကို ပြန်တွေ့ချိန်မှာတော့ ဗိုက်မှာလဲ ချုပ်ရိုးရာကြီးတွေ့သလို လူလဲ ပိန်ချုံးနေပါပြီ…ဘယ်တွေရောက်လဲ မေးတော့ သူဆေးရုံဆင်းပြီး ဦးလေးတစ်ယောက်နဲ့ နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဗိုက်အောင့်လို့ ဗိုက်ခွဲရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီး ချုပ်ရိုးရာကြကို ပြပါတယ်…အဲ့ကနေ မူဆယ်ကို အလုပ်ရှာသွားပါတယ်တဲ့…မူဆယ်မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံစုပြီး ထားသွားပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားနောက်လိုက်ချင်လို့ပါတဲ့ရှင်….
ဒီလိုနဲ့ ခိုလှုံရာလေးကို ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်…အနာတွေပေါက်လာတယ် ကိုယ်တွေယားလာတယ်…ဒါနဲ့ ဆေးစစ်ကြည့်တော့ HIV+ ပါတဲ့ရှင်…ထင်တော့ ထင်ထားပေမဲ့ သူကူးခံရပုံလေးကြောင့် ရင်နာခဲ့ရပါတယ်…
သူမ သူမအမျိုးသားနောက်လိုက်ဖို့ ပိုက်ဆံရှာဖို့အတွက် မူဆယ်ကိုတက်တယ်…ဟိုရောက်တော့ သူမနေဖို့ ဘုန်းကြီးကျောင်း လိုက်ရှာပါတယ်တဲ့…အဲ့မှာ ဆိုကယ်ကယ်ရီသမားတစ်ယောက်က ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး ခြုံတစ်ခုထဲခေါ်…မျက်နှာကို ပုဆိုးနဲ့အုပ်၊ လက်သီးတွေနဲ့ ထိုးပြီး အကြိမ်ကြိမ် သားမယားပြုကျင့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့…နာလွန်းလို့ သူ ထတောင် မထနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့…အဲ့လိုကြားရတော့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာ ဒုတိယအကြိမ် ထားခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်လို့ မဆုံးတော့ပါဘူး…ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘပုံ့သာပြန်ခေါ်ခဲ့ရင် ဒီလို အဖြစ်ဆိုးမျိုး ကြုံချင်မှ ကြုံရမှာပါ….
ဒီလိုနဲ့ HIV စင်တာနဲ့ ဆက်သွယ် ART ဆေးတိုက်ပြီး ရိပ်သာမှာ ဆက်လက်စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်…ရိပ်သာမှာ နေစဉ် မအေရှာပေးဖို့ တတွတ်တွတ်ပြောတာနဲ့ နောက်ဆုံး သူ့အမေ သတင်းစုံစမ်းပြီး သွားခေါ်ပေးခဲ့ပါတယ်…စိတ်မကျန်းမာတဲ့ မအေအိုကြီးကို တွေ့တဲ့နေရာက မန္တလေးက ဘုရားကြီးရှေ့မှာ တောင်းရမ်းနေတာပါ….
ဒီလိုနဲ့ မအေကြီးပါ ပြန်ခေါ်ရင်း သားအမိနှစ်ယောက် ရိပ်သာမှာ အတူနေကြပြန်ပါတယ်…သိပ်မကြာပါဘူး…ရိပ်သာမှာ နာရေးကိစ္စရှိတဲ့ တမနက် ရိပ်သာကနေ သားအမိနှစ်ယောက် လစ်ထွက်သွားပါတော့တယ်…အဲ့ကနေ အစရှာမရတော့တာ ခုနောက်ဆုံးပြန်တွေ့တဲ့အချိန်ထိပါ…ဒီကြားထဲ ခြံစည်းရိုးတွေ ဖြုတ်ပြီးထွက်လို့ ရန်ကုန်ထိလိုက် အဖွဲ့ဝင်တွေက ရုပ်ဖျက်ပြီး ပြန်ခေါ်လာရတာတော့ ခဏခဏရယ်ပါ…
ခုနောက်ဆုံးအကြိမ် တွေ့တော့လဲ သူသိပ်ချစ်တဲ့…သူအရမ်းနေချင်တဲ့ တောင်ကြီးမြို့က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တခုမှာပါ..သူ့မေမေတော့ မတွေ့တော့ပြန်ပါဘူး..ဒီတခါတော့ အခြေအနေက အတော်ကို ဆိုးနေရှာပါပြီ…ဒီခေါက်လဲ ဘယ်သူစော်ကားထားပြန်တယ်တော့ မသိပါဘူး…ခါးမှာတော့ ပုဆိူးကြီးနဲ့ပါ…သူ့ကို စောင့်ရှောက်ရတာ အရမ်းကို ခက်ခဲပေမဲ့ စောင့်ရှောက်ဖူးတဲ့ သံယောဇဉ် ရှိနေတော့ ဘယ်မှာတွေ့တွေ့ သွားခေါ်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်….
ART ဆေးပြတ်တာ ကြာပြီလဲဖြစ်သလို၊ ထမင်းလဲ လုံးဝမစားတော့ပါဘူး…စိတ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကလဲ အတော်ကို ဆိုးနေရှာပါပြီ…ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ နေပြီး အော်ဟစ်ဆဲသောင်းကျန်းနေတာမို့ အခန်းတစ်ခုထဲ ထည့်ထားရပါတော့တယ်…ပုံ့ကိုတွေ့ရင်တော့ ဘယ်လောက်အော်နေနေ လက်အုပ်လေး တချီချီနဲ့ ပုံ့ပုံ့ရယ်…ပုံ့ပုံ့ရယ် နော်နော်နဲ့ ကလေးလေးလို ပုံ့ ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီတွေ ပူဆာတယ်…အအေးဝယ်တိုက်ခိုင်းတယ်….သူခွေးပြိတ္တာကြီးဖြစ်မှာစိူးခို့ ထမင်းမစားတဲ့အကြောင်းတွေ ပြောရှာပါတယ်….
ဒီလိုနဲ့ အခုတော့ ပိန်ချုံးလို့ သူ့ဘဝနောက်ဆုံးအခြေအနေကို ရောက်နေပြီလို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်…ပုံ့ သွားကြည့်ပြီး သူ့ကို မသေချင်ရင်၊ ဆေးရုံတက်ရမယ်၊ ဆေးရုံတက်ပြီးကောင်းသွားရင် ဂါဝန်တွေလဲပေးမယ်၊ အချိုရည်လဲတိုက်မယ်…အဖွားတွေနဲ့လဲ ထားပေးမယ်နော်ဆိုတော့ မတက်ချင် တက်ချင်နဲ့ ဆေးရုံကို လိုက်သွားရှာပါတယ်…
ခုတစ်ချိန်ဟာ သူ့ရဲ့ နေဝင်ချိန်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းနေမိပေမယ့်…အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ချစ်သောသူတွေနဲ့ သေကွဲ၊ ရှင်ကွဲ အခါခါကွဲရ၊ မချစ်မနှစ်သက်သောသူတွေရဲ့ အနိုင်အထက်ပြုခြင်းကိုလဲ ထပ်ခါထပ်ခါခံရ၊ ပျော်သောအရပ်မနေရ၊ မပျော်တဲ့အရပ်မှာနေရတဲ့အပြင် စိတ်ရောဂါအပြင် ရောဂါဆိုးကြီးရဲ့ ဒဏ်ပါ လှိမ့်ပိမ့်နေအောင် ခံနေရှာတဲ့ သူမကို ဒီဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားစေချင်ပါပြီ….
ခုလဲ ဝန်ထမ်းကလေးဝတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်လေးကို တောင်းပြီး တစ်၊ နှစ်၊ သုံး လို့ ရေလိုက် ဖိနပ်လေး ဟိုချလိုက် ဒီချလိုက်လုပ်ရင်း ဆေးရုံတက်ဖို့ ပါသွားလေရဲ့…လိမ်လိမ်မာမာ ဆေးကုခံပါ့မယ်လို့ ကတိတွေ အထပ်ထပ် ပေးရင်း ဆေးရုံမှာ သောင်းကျန်းနေပြန်ပြီတဲ့လေ…
မကြာခင် ဆေးရုံက အဆင်မပြေလို့ ဆင်းရမယ်ထင်ပါတယ်…HIV စောင့်ရှောက်တဲ့ ဂေဟာဆိုတာလဲ စိတ်ကျန်းမာရေးလက်မခံလို့ ပို့မရ၊ ဆေးရုံလဲ တင်မရ၊ လူလဲ ပိန်းချုံးလို့ အားအင်ကုန်ခန်းနေရှာပါပြီ….
ပုံ့ သူ့အစား တစ်ခုလောက်တောင်းဆိုပါရစေ…သူတတွတ်တွတ်ပြောနေရှာတဲ့ ဂျပန်ပြည်ကြီးက သူ့အမျိုးသားဆိုသူ ဒီစာလေးကို ဖတ်မိရင် ပုံ့တို့ ရိပ်သာကို ဆက်သွယ်ပြီး သူနဲ့ Video Call လေး ပြောပေးပါရှင်…အကိုဟာ သူ့ဘဝအတွက် နောက်ဆုံး ကောက်ရိုးတမျှင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာမို့ပါနော်….
Thinn shwe sin haling